24 Jir U Dhashay Nayjeeriya Oo Diyaarad ka Samaysan Gawaadhi Qaddiimi ah iyo Hadhaaga Baaskiiladaha | Araweelo News Network
24 Jir U Dhashay Nayjeeriya Oo Diyaarad ka Samaysan Gawaadhi Qaddiimi ah iyo Hadhaaga Baaskiiladaha
Nin dhallinyaro ah oo 24 jir ah, una dhashay dalka Nayjeeriya ee galbeedka qaaradda Afrika, isla markaana ah arday barta cilmiga Faysigiska (Physics), ayaa ku guulaystay inuu gawaadhi qaddiim ah iyo hadhaaga baaskiiladaha ka sameeyo diyaarad nooceedu yahay Helikobtar (Helicopter) oo shaqaynaysa.
Wiilkan dhallinyarada ah oo magaciisu yahay Mubarak Muhammed Abdullahi waxa uu muddo siddeed bilood ah samaynayey diyaaradan, isagoo lacagta uu ku kharash gareeyeyna ka helayey xirfad uu ku shaqaysto oo ah hagaajinta telefoonnada gacanta iyo kombuyuutarada.
Waxa uu soo urursaday diyaarado burburay qaybahooda, gawaadhi gaboowday iyo baakiilado. Diyaaradan oo 12 mitir dherarkoodu tahay oo aan waligeed kor u duulin siddeed fuudh, ayaa hadda uu xalkeeda u helay, kadib markii uu ku rakibay mishiin noociisu yahay 133 Horsepower oo uu kala soo baxay gaadhi qaddiimi ah oo noociisu yahay Honda Civic.
Sidoo kale, kuraasta uu xagga bayloodka u rakibay waa laba kursi oo uu gaadhi Toyota ah kala soo baxay, isagoo kuraas kale ee dambe oo qurux badan u sameeyey.
Waxa kaloo uu u sameeyey boton nooca qarxinta sameeya ah ee u saamaxa diyaaradu in ay xawaare ku socoto. Sidoo kale waxa ku rakiban kamarad yar oo uu shaashadna u sameeyey oo uu bayloodka diyaaradda wadaa u arkayo dhulka iyo dhaqdhaqaaqa diyaaradda. Waxa uu u sameeyey oo kale qalabka raadaal ah oo uu cid kula xidhiidhaya..
Mr. Mubarak waxa uu internet ka bartay waxyaabaha aasaasiga ah ee diyaaradda Helicopter u saamaxa in ay duusho, taasoo u saamaxday inuu ku guulaysto hawsha uu go’aanka ku gaadhay ka midho-dhalinteda.
“Waad istaadhaysaa, una ogolow in ay istaadhanto daqiiqad amma laba daqiiqo, kadibna horaad u qabanaysaa si ay u dhaqaaqdo. Inta aad cadaadiso badhanka waa inta aad ku qasabto in ay xoog u dhaqaaqdo, marka aad gaadhsiiso 300 rpm waxaad qabanaysaa biriiga si ay u istaagto,” ayuu yidhi Mubarak oo ka hadlaya sida diyaaradiisu u shaqaynayso.
Diyaaradan uu Mubarak sameeyey oo aan lahayn qalabkii ay hawada ku cabbiraysay (Atmospheric pressure), huurka iyo jooga (Altitude and Humidity), balse waxa uu hadda ku hawlan yahay inuu u helo mishiin u saamaxa in ay si fiican u duusho, waxaannu yidhi; “Waxa ay noqonaysaa guul xad-dhaaf ah in la sameeyo diyaaradan iyo qalabka sidan u kakan samayntiisu.”
Qiimaynta lagu sameeyey diyaaradan waxa ay iftiimisay in ay awood u yeelanayso in halkii saacadoodba ay hawada u duuli karto 15 fiit. Waxa hadda Mubarak loogu bushaareeyey in diyaaradiisa ay u shaqaynayso injiin cusub oo looga soo iibin doono dalka Taiwan oo ka mid ah dhul weynaha waddanka Shiinaha.